Where to buy food and clothes – information for newcomers | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
US မှာစျေးဝယ်, ဓာတ်ပုံကိုမူပိုင်ခွင့်ဗြိတိန်အကူအညီ, CC ကို..
The word groceries means food you buy. သငျသညျအကွောငျးကိုဖြုန်းဖို့ကြိုးစားသင့် 20% or less of your total family income on groceries each month. ရှိပါကဤသည်ကိုဆိုလိုသည် $1,000 ဝင်ငွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီလ, သငျသညျသုံးဖြုန်းသင့်တယ် $200 or less on groceries. သငျသညျအရဆိုပါက $500 လတိုင်း, သငျသညျကိုသာသုံးဖြုန်းဖို့တတ်နိုင် $100 အစားအစာအပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း, if you are to also pay for housing and utilities.
Some things that cost little in your home country may be expensive in the USA. ဥပမာ, မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒုက္ခသည်များလတ်ဆတ်တဲ့အုန်းသီးနှင့်သရက်သီးကိုစားလိုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အဲဒီပစ္စည်းစျေးကြီးတယ်.
Meat and fruit are often expensive in the USA. ဒါကြောင့်, သငျသညျအခြို့သောအသစ်သောအစားအစာများအဖြစ်သင့်ရဲ့ရိုးရာအစားအစာများကိုစားရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
အစားအစာဝယ်ယူ, အထူးသဖြင့်ဆန်နှင့်ပဲမျိုးစုံနှင့်အများအပြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အဆိုပါကုန်စုံစတိုးဆိုင်ထဲကနေနှင့်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ချက်ပြုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ကနေအစားအစာဝယ်ယူရန်ထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသည်.
If an item inastore is priced, သင်သည်ထိုစျေးနှုန်းပေးချေရန်ရှိသည်. သို့သော်, ဒီအသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းရောင်းစျေးကွက်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များတွင်လျော့နည်းမှန်.
US မှာကုန်စုံစတိုးဆိုင်အစားအစာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသယ်ဆောင်ကြောင်းကြီးမားသောစတိုးဆိုင်များများမှာ. အတော်ကြာကြီးမားကုန်စုံရှိပါတယ် “ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များ။” တစ်ဦးကကွင်းဆက်အမေရိကန်တစ်လွှားကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်တူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းစတိုးဆိုင်၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါသည်. ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်ကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားထားတယ်, အသား, စည်သွတ်အစားအစာများ, စသည်တို့ကို. အတော်များများကကြီးမားကုန်စုံစတိုးဆိုင်အခမဲ့ sign up ကိုရန်သင့်အားအားပေး “ကလပ်” ကတ်များ, သို့မဟုတ် “အဖွဲ့ဝင်ကတ်များ. သင်မကြာခဏတစ်ကဒ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အစားအစာအပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးခံယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလုပ်ဖို့ကောင်းလှ၏, ကဒ်အခမဲ့သော်လည်း. သည်အခြားစတိုးဆိုင်များ, ထိုကဲ့သို့သောကော့စအဖြစ်, သူတို့ရဲ့ကတ်များများအတွက်တာဝန်ခံလုပ်ပေးနှင့်ပိုပြီးဈေးပေါပေါအစားအစာအမြောက်အမြားရောင်းချ. သင်တစ်ဦးကြီးတွေမိသားစုရှိသည်နှင့်အမြောက်အမြားအတွက်အစားအစာနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူပါကဤအလာရောက်ပူးပေါင်းတန်ဖိုးရှိများမှာ.
US မှာအများစုကမြို့ကြီးများလယ်သမားများ’ စျေးကွက်, အထူးသဖြင့်နွေရာသီအတွက်. တစ်လယ်သမားမှာ’ စျေးကွက်, သငျသညျလယ်သမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်စိုက်ပျိုးရောင်းချလတ်ဆတ်တဲ့အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာတှေ့နိုငျ. နွေရာသီမှာ, သင်တူညီပစ္စည်းများကိုတစ်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်မှာထို့နောက်လျော့နည်းပိုက်ဆံမယ်လို့ဖြုန်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မအမြဲ - အချို့သောကြီးမားသောကုန်စုံစတိုးဆိုင်အော်ဂဲနစ်အသီးအနှံ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုကြီးထွားနေသောလယ်သမားများထက်လျော့နည်းဘို့ရောင်းချနိုင်ကြသည်, ဥပမာ.
ဤရွေ့ကားတစ်ခါတစ်ရံတွင်အစားအသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အစားအစာ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရောင်းချရန်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့စတိုးဆိုင်များမှာ. သူတို့သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားနှင့်နီးစပ်သူဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဤစတိုးဆိုင်အဆင်ပြေဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, သူတို့မကြာခဏကုန်စုံစတိုးဆိုင်ထက်ပိုစျေးကြီးတယ်.
တချို့ကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတိုင်းရင်းသားစတိုးဆိုင်ရှိ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံကနေအစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချတဲ့စတိုးဆိုင်အဓိပ္ပာယ်. ဥပမာ, တစ်ခုရှိစေခြင်းငှါ, “အိန္ဒိယစျေးကွက်” သို့မဟုတ်တစ် “တရုတ်စျေးကွက်” သောသူတို့နိုင်ငံတွေထဲကနေအစားအစာများရောင်းချ. You can find ethnic grocery stores in many cities in FindHello.
Restaurants in the USA tend to be the most expensive place to get food. အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာစားသောက်ဆိုင်ပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း, but you have to choose carefully so as to not eat too much unhealthy food.
In the USA, you have lots of options of where to shop for clothes and things for your home. သင်အမြဲသူတို့ရောင်းချမှုအပေါ်အခါအမှုအရာကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုးစားသင့်!
သငျသညျအဝတ်အစားတွေကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်စဉ်းစားကြသောအခါ, သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကိုစဉ်းစား. တစ်ပတ်ရစ်စတိုးဆိုင်များအဝတ်ရောင်း, နေအိမ်ပစ္စည်းများ, နှင့်ပရိဘောဂအခြားလူဝေးပေးပြီ. သငျသညျကွညျ့ရှုဖို့အချိန်ယူလိုလျှင်, သင်မကြာခဏအလွန်ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်များအတွက်ပစ္စည်းများ, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ, ကစားစရာအရုပ်, တစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှာပိုပြီး. ဤရွေ့ကားစတိုးဆိုင်များအလွန်တန်ဖိုးနည်းဖြစ်လေ့, သူတို့မကြာခဏ store မှာအရာအားလုံးရောင်းချခြင်းအပေါ်ရှိရာရက်.
တစ်ဦးကကားဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ခြံရောင်းရန်ရှိသည်အသုံးတ်အထည်များနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွေ့ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးစျေးပေါများမှာ. Garage sales and yard sales are one of the few places you can barter in the USA. သင်တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်ခြံရောင်းချခြင်းမှာမှန်လျှင်ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်, သင်ကို item ပေါ်တွင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအဘို့အမေးရန်ကြိုးစားနိုင်.
သငျသညျဌာနစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ကုန်တိုက်မှာလည်းစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားစတိုးဆိုင်ကိုပိုစျေးကြီးဖြစ်နှင့်ကျော်ကြားသောနာမကိုအမှီအမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်ဖို့လေ့. ဒါကအမှတ်တံဆိပ်လူသိကြောင့်အချက်တွေကိုလူကြိုက်များဆိုလိုတယ်, ထိုကဲ့သို့သော Nike ကဖိနပ်အဖြစ်.
Superstores are stores in the USA that sell nearly everything. ဤရွေ့ကား Walmart တူသောစတိုးဆိုင်များပါဝင်သည်, ပစ်မှတ်, နှင့် Kmart. ဤရွေ့ကားစတိုးဆိုင်များယေဘုယျအားဖြင့်အမည်အားအမှတ်တံဆိပ်ဌာနစတိုးဆိုင်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း.
There are probably lots of local stores in your new town. ကိုယ်ငွေသည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဒေသအလိုက်စျေးဝယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သင်ပင်အခြားဒုက္ခသည်ပိုင်စတိုးဆိုင်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ.
သင်သည်သင်၏အမျိုးအဘို့ပစ္စည်းများလိုအပ်သို့မဟုတ်သင်၏အိမ်ပြုပြင်လိုလျှင်, သင်တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်. The people who work at these stores will answer your questions about home repair.
Stores in the USA let people return goods if there is something wrong with them or even if they just change their mind. But they will not allow you to return something after you have used it. သငျသညျစျေးဝယ်အခါတိုင်း, သင်၏ပြေစာကိုစောင့်ရှောက်. This is proof that you bought the item and when you bought it. သင်တစ်ဦးကို item ပြန်လာချင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, you will need the receipt. It is harder to return fresh foods, but you should always return food if you found it was spoiled or past its “sell by” နေ့စှဲ.